Baro 5 nooc oo ka mid ah hubka halista ah ee Maraykanka oo ay Israel jeclaan lahayd balse aysan haysan + Sawirro (Qaybtii 2-aad) | Hadalsame Media
Home Ku Biiri Aqoontaada Baro 5 nooc oo ka mid ah hubka halista ah ee Maraykanka...
Baro 5 nooc oo ka mid ah hubka halista ah ee Maraykanka oo ay Israel jeclaan lahayd balse aysan haysan + Sawirro (Qaybtii 2-aad)
(Tel Aviv) 08 Abriil 2019 – Maraykanku waa saaxiib ruuxi ah oo ay Israel leedahay, haddii aan si kale u iraahdo waa ninka ku dhex haya 400m oo Carab ah, si kale haddii loo yiraahdo waxaad xogta ka heli kartaa heesta Xasan Aadan ee ”waa 100 Yuhuuduye”.
Haddaba, waloow uu Maraykanku aad u naas nuujiyo una koolkooliyo isagoo siiya gargaarka ciidan ee ugu badan ee uu siiyo dal saaran dunida guudkeeda, kuwaasoo iskugu jira agab ciidan, tababarro iyo lacag kaash ah misna weli wax buu la haraa Maraykanku.
Haddaba, aanu idinla wadaagno 5 nooc oo ka mid ah hubka uu Maraykanku farsameeyo ee ay Israel ku riyoonayso inay hesho, balse aan weli gacan ugu jirin.
Xeerka Obey Amendment, oo mamnuucaya in dibedda loo dhoofiyo dayuuradaha F-22 Raptor, waxaa lasoo saaray iyadoo maanka lagu hayo xiriirka adag ee Israel.
Walaaca uu Maraykanku qabo wuxuu salka ku hayaa cabsi ay ka qabaan in Israel ay tiknolojiyaddaa u gudbin karto Russia ama China, sidaa darteed, wuxuu Maraykanku gartay inuusan Israel ka celin karin dayuuradahan haddii aanu sharci kasoo saarin.
Sidaa darteed, iminka dayuuraddan oo lagu sheego midda dunida ugu casrisan, waxaa kaliya adeegsan kara Ciidamada Cirka Maraykanka ee USAF.
Taariikhiyan, waxay Israel danaysaa dayuurado duqaynta ku wanaagsan, waxayna IDF iibsadeen isla markii ay soo bexeen dayuuradaha F-15 oo iminka laga yara gudbey, kuwaasoo ay wax ka bedeleen kaddibna ka dhigeen kuwo duqaynta ku ba’an.
Sidaa darteed, waxay Maraykanku ka fikirayeen in F-22 ay laftooda maduufikayn karaan oo ay wax kale kasoo saari karaan, sidaa darteed, Maraykanku maba qamaarin.
La soco qayb 3-aad…
Previous articleEdmonton teen fundraising for prosthetic leg after car bombing in Somalia + Video
Next articleHABTII DUNIDA HANATAY! Gabadha Soomaaliyeed oo sawirka caan baxay la gashay RW New Zealand oo hadashay + Sawirro